नेकपाका विद्यार्थी नेताको आपत्तिजनक भाषा : बाबुरामलाई श्रद्धाञ्जली ! | Ratopati
नेकपाका विद्यार्थी नेताको आपत्तिजनक भाषा : बाबुरामलाई श्रद्धाञ्जली !
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeजेठ १०, २०७७ chat_bubble_outline2
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूका संयोजक हुन् ऐन महर । नेकपामाथि आस्था राख्ने लाखौ विद्यार्थीका नेता उनले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता डा बाबुराम भट्टराईविरुद्ध आपत्तिजनक भाषा प्रयोग गर्दै गाली गरेका छन् ।
लाखौ विद्यार्थीका नेताले प्रयोग गर्ने भाषाशैली र प्रस्तुतिले आम विद्यार्थीले कस्तो संस्कार सिक्लान् र माउ पार्टीले कस्तो विद्यार्थी नेता जन्माए भन्नेमा प्रश्न खडा भएको छ ।
पटक पटक सामाजिक सञ्जाल र अन्य औपचारिक कार्यक्रममा समेत विपक्षीप्रति तल्लोस्तरको भाषाशैलीका साथ आलोचनामा उत्रिने उनले पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईलाई श्रद्धाञ्जली दिएका छन् । उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भट्टराईको आलोचना गर्दै श्रद्धाञ्जली दिएका हुन् । ‘धेरै पढे विद्धान हुन्छ, विद्धान बिग्रे बाबुराम हुन्छ भन्थे पुष्टि हुँदैछ। यी गद्दार दलाल राष्ट्रघातीलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली !’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
बाबुरामलाई यसरी आपत्तिजनक टिप्पणी गरेपछि धेरैले महरको आलोचना गर्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् । अत्यधिक आलोचना भएपछि उनले आफ्नो फेसबुकमा अभिव्यक्ति सच्याएका त छन् तर उनको बौद्धिकता र चेतना स्तरमाथि भने टिप्पणी गर्ने क्रम रोकिएको छैन ।
भट्टराईले शनिबार बिहान कोरोनाविरुद्धको लडाइमा सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको आशयसहित टिप्पणी गरेका थिए । उनले नेकपाभित्र ओली समूहमा विवेकहीन मान्छे भएको भन्दै लाखौ श्रमिकले दुःख पाएर स्वदेश फर्किँदा कोरोनाको परीक्षण समेत हुन नसकेको बताएका थिए ।
‘नेकपाको ओली गुटभित्र विवेक भएका मान्छे बाँकी छैनन् ? विदेशमा काम गर्ने लाखौं श्रमिक स्वदेश फर्किरहेछन्, तिनको परीक्षण, व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। अरिङ्गाल सेनालाई प्रतिपक्षीको खेदो खन्नु सट्टा मौरी सेनामा बदलेर कोरोना विरूद्ध लडाईँमा लाउन सकिन्न ? मान्छे नरहे पहाड मात्रले राष्ट्र बन्ला ?’
May 23, 2020, 3:03 p.m. नरेन्द्र नाबु राना मगर
खास मा एस्ले Same to you भन्न खोजेको होला अनि उता बाबू राम ले पनि सोचेका same to me होलान ।
May 23, 2020, 2:59 p.m. शन्खु
कस्तो गिदि नभएको बिद्यार्थी नेता ? यस्ता बाट के आश गर्नु ???
जसपा नेपाल अप्ठ्यारोमाः संविधान संशोधन प्रस्तावमा सरकार रोज्ने कि मधेश ?
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच सेना परिचालनबारे छलफल
बाँके बस दुर्घटनाका १२ मृतक र २० घाइतेको परिचय खुल्यो (नामावलीसहित)
संसदमा उठ्यो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तलब कटौतीको माग (भिडियो)
राजपा र समाजवादीद्वारा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता
२० औं अन्तराष्ट्रिय दुध दिवसः लकडाउनका कारण दैनिक १० करोड भन्दा बढी घाटा